China Ultrasonic probe sterilizer PBD-S3 Kugadzira uye Fekitori | Doneax
Ultrasound probe sterilizer PBD-S3 ndeye ultrasonic probe disinfection chigadzirwa chinoshandisa huwandu hwakawanda hwekuvandudza matekinoroji. PBD-S2 yakasarudzika inoshandisa inotonhora mwenje disinfection tekinoroji kupedzisa otomatiki disinfection yeiyo ultrasound probe mumasekondi 30-60, inova inoshanda, inokurumidza uye inoshamwaridzika nharaunda. Inogadzirisa dambudziko reprobe disinfection, inoderedza njodzi yehutachiona hwehutachiona, uye inogonesa iyo disinfection technical technical kune mumwe munhu panguva. Panguva imwe chete disinfection yeprobes mbiri inogona kuwanikwa panguva imwe chete, kuchengetedza mutengo uye nguva uye kuona hunyanzvi uye hunyanzvi mukushambidza kweiyo ultrasound probes!
1. Paramende indekisi:
1) Tora UVLED yakakwira frequency uye yakaderera wavelength inotonhora ultraviolet disinfection tekinoroji.
2) Iyo yekushandisa nguva ye UV UV ndeye ≥3 makore, uye iyo UV spectrum renji ndeye 250 ～ 280nm.
3) Pakati penzvimbo mwenje simba: iro mwenje simba pa6cm iri -500uw / ​​cm2.
4) Kushanda nguva yekumisikidza: 30 uye 60 masekondi.
5) High-level disinfection inopedzwa mumasekondi makumi matanhatu, uye iyo sterilization mwero weBacillus subtilis iri -99.9%.
6) Kusvikira pakati pepakati disinfection mumasekondi makumi matatu, E. coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Mycobacterium chelonae, nezvimwewo ≥99.9%.
7) Panyama disinfection, hapana kukuvara kune acoustic lens uye yekuongorora imba, uye kugara uchichengetedza imba yekuongorora ine antibacterial coating.
8) Kaviri disinfection tangi dhizaini inogona disinfect ma probes maviri panguva imwe chete, imwe yacho iri intracavity probe.
9) Yakazara otomatiki pafiripi yekuvhara uye izere nekuchenjera disinfection.
10) Dhijitari inoratidzira disinfection nguva.
11) Iyo probe slot ine yakavakirwa-mukati chaiyo chinzvimbo chinzwa, iyo inozviongorora yega kana paine probe uye kana iyo probe yakaiswa munzvimbo. Mushure mekuuraya disinfection kwapera, hapana kudzoreredzwa kwehuswa kunodiwa
12) Dhizaini yakagadzirirwa vanhu, kusunungurwa zvishoma, haina kukanganisa nguva yechiremba.
13) Inotora nzvimbo diki uye iri nyore kufamba.
14) Inokodzera dumbu, nhengo diki, moyo, nyini, rectum, intraoperative probe.
15) Yekukura saizi: 430X218X130MM, net uremu hwemidziyo ≤25KG.
16) Kushanda mamiriro
Ambient tembiricha: (5 ～ 40) ℃, hama mwando: (30 ～ 75)%
Magetsi emagetsi emagetsi: ~ 220V, magetsi emagetsi frequency: 50Hz
17) Warranty nguva: mwedzi gumi nemiviri.
18) 7X24 maawa ebasa
Type Ultraviolet sterilizing mudziyo
Model Nhamba PBD-S3
Nguva yekubvisa hutachiona ≤ 60 masekondi
UV LED Spectral renji 260-280nm
UV akatungamirira Voltage 5.5-7.5V
UV akatungamirira Current Ma200ma
Simba rekubuda simba M10mw
Module UV mwenje wesimba ≥500μw / cm2 (7cm kubva pakati)
Saizi yekugamuchira L428mm * W218.8mm * H207.6mm
Tsvimbo yekutsigira (nzvimbo, kureba) saizi 50mm * 50mm, kukwirira 580-1000mm
Simba rekuisa AC 220V 50HZ
Rated simba ≤90W 50Hz
1) Kugadzira: inyowani yepamusoro-frequency uye yakaderera-wavelength inotonhora ultraviolet mwenje inosanganiswa neyakanaka uye yakaipa ion disinfection nzira
2) Kurumidza: Inongoda 30S, 60S yekupedzisa yepakati uye yakakwirira nhanho disinfection uye sterilization.
3) Kudzivirirwa: Yakazara otomatiki disinfection pasina bhuku rekupindira, rakachengeteka uye rakavimbika.
4) Kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza: Akatungamirira disinfection michina ine hupenyu hwakareba, yakaderera simba rakawanda, uye ine zvakatipoteredza zvine hushamwari.
5) Akangwara: Chiise zvinyoro nyoro, pasina kuchinja maitiro echiremba, akangwara uye otomatiki disinfection.
6) Nyarara: kusarudzika kwakasarudzika uye izere mbeveve inoshanda mode, hapana ruzha kupindira zvinhu.
Ultrasound Ongorora Sterilizers
Iko mukati meiyo sterilizer inoshandisa UV LED yakakwira-frequency uye yakaderera-wavelength inotonhora ultraviolet mwenje mbichana tekinoroji pamwe neion mwenje tekinoroji, uchishandisa iyo yekuongorora mukombe mubati, otomatiki kusimudza system uye induction sensor pane tsvimbo yekutsigira yemuchina, 30 masekondi, 60 masekondi kupedzisa iyo ultrasonic probe Medium uye yepamusoro-chikamu disinfection uye sterilization, inoshanda, nekukurumidza, uye zvakatipoteredza zvine hushamwari, kugadzirisa dambudziko reprobe disinfection, kuderedza njodzi yeprobe utachiona, uye kuzadzisa zvinodiwa zvemunhu mumwe, kumwe kushandiswa, imwe disinfection mu iyo disinfection Specification.
Ichishandisa kumwe kusimba kwe 260nm-280nm yakadzika ultraviolet kutonhora mwenje inogadzirwa ne ultraviolet LED, iyo ultraviolet inotonhora mwenje inokurumidza kuparadza mamorekuru chimiro uye protein yeDNA (deoxyribonucleic acid) kana RNA (ribonucleic acid) mumasero ehutachiona, zvichikonzera kukura sero kufa Uye (kana) regenerative sero kufa kuti uwane sterilization. Iyo inotonhora ultraviolet mwenje ine hunhu hweakakwira frequency uye mapfupi wavelength, ayo anogona kuchengetedza pamusoro pechinhu chakavhenekerwa chisina kukuvara apo ichikurumidza kutapisa. Yemukati ipapo pakarepo-yakasimba simba uye isina kunaka ions inoona matatu-mativi nzvimbo nzvimbo disinfection, uye inogona zvakare kuuraya utachiona mamwe maburi nemakona.
1) 30S, 60S inogona kupedzisa yepakati uye yakakwirira nhanho disinfection uye mbereko
2) Panyama disinfection, hapana kukuvara kune acoustic lens uye yekuongorora imba.
3) Iyo yekuongorora groove inogona kutsiviwa chero nguva zvinoenderana nechirongwa chekuongorora.
4) otomatiki vachisimudza, ese akanyarara basa, ese akangwara disinfection.
5) Dhijitari kuratidzwa kweiyo disinfection nguva.
6) Iyo infrared sensor yakavakirwa muchirongwa chekuongorora, icho chinogona kuona otomatiki kana paine probe kana kwete.
7) Mushure mekuuraya disinfection kwapera, disinfection haizodzokororwa.
8) Dhizaini yakagadzirirwa vanhu, haichinje tsika yechiremba yekushandisa ma probes.
Base 1 chidimbu
Column 1 chidimbu
Ongorora mafuta ekuchengetedza 1 bhodhoro
M10 sikuruu 1 chidimbu
Chinyorwa chekudzidzisa, chitupa, kadhi rewarandi 1 kopi
Pashure: Ultrasonic probe sterilizer PBD-S1
Zvadaro: Chishandiso nemidziyo disinfection imba yekuchengetera
3.5 Mhz Ultrasound Ongororo
Abdominal Ultrasound Ongorora
Bluetooth Ultrasound Ongorora
Cardiac Ultrasound Ongorora
Handheld Ultrasound mudziyo
Yakabatwa Ultrasound Probe
Chiremba Ultrasound Machine
Chiremba Ultrasound Transducer
Chiremba Ultrasound Probe
Yakagadziriswa Array Probe Ultrasound
Inotakurika Ultrasound Probe
Robotic Ultrasound Ongororo
Diki diki Ultrasound Probe
Ultrasound Machine Mashini
Ultrasound Machine Inotsvaga Mhando
Ultrasound Probe Mutengo
Usb C Ultrasound Ongorora
Usb Ultrasound Ongorora
Wifi Ultrasound Ongorora
Wireless Ultrasound Ongorora
Wireless Ultrasound Ongorora Mutengo